Field Call Officer | Convenience Prosperity Co.,Ltd (YHE) ﻿
16.7.2020, Full time , Automotive
•	Customer အားလုံး၏ data base များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်ရမည်။
•	သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပြီး ငွေသွင်းရန်ကျန်သော client များအား ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ ဖြစ်စေ ငွေကောက်ခံခြင်း။
•	Customer များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ငွေပေးသွင်းနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။
•	စက်များ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန် ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခါတိုင်းတွင် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Collection report များကို အချိန်မှီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း sales department နင့်အတူ assessment လုပ်သည့်အခါ Customer ထံ သွားရောက်ရမည်။
•	Collection report များကို အချိန်မှီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း sale department နင့်အတူ assessment လုပ်သည့်အခါ Customer ထံ သွားရောက်ရမည်။
•	Any Bachelor of Degree.
•	Skills in MS office.
Field Call Officer Customer Service & Call Centre Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Convenience Prosperity Co.,Ltd (YHE) Customer Service & Call Centre jobs Customer Service & Call Centre jobs Automotive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Naypyitaw City 111 Days
Kayin State 163 Days
Tanintharyi Region 172 Days
Service Engineer(Heavy Machinery Field)